Hlola iPapua New Guinea - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili eziphezulu ePapua entsha Guinea.
Okufanele ukwenze ePapua Guinea entsha.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yePapua
Bukela ividiyo ekhuluma ngePapua
Hlola iPapua New Guinea izwe lesiqhingi e Oceania, kanye nemizi yayo eminingi okufanele ivakashelwe.
Port Moresby - inhloko-dolobha enamasimu ayo ajabulisayo we-Zoological, isakhiwo sePhalamende, imnyuziyamu, kanye nokujwayelekile I-Melanesian umkhathi.
I-Alotau - inhlokodolobha ebekwe emuva yesifundazwe saseMilne Bay kanye nesango leziqhingi ezithile ezikhangayo kodwa ezikude.
IGoroka - idolobha elikhangayo eliphakeme elinesimo sezulu esimnandi kanye neGoroka Show yonyaka. Isikhungo somkhakha wekhofi wezwe.
Lae - idolobha lesibili lezwe, isikhungo esikhulu sezentengiselwano kanye nesango eliya eHighlands.
IHagen - idolobha elingumngcele 'wasentshonalanga' eHighlands, elizokwazisa ngesimo sezulu esipholile nesiphakeme samaHighlands.
IMadang - idolobha elihle elinezindiza ezifudumeza umoya zamalulwane kusihlwa (akukho emthethweni ukuzilimaza), futhi kuphonsela nomoya obabazekayo kakhulu.
I-Rabaul - idolobha elingaphansi kwentaba-mlilo esebenzayo eyakhishwa yalimala kanzima ukuqhuma okukhulu kwe-1994.
I-Vanimo - idolobhana elisemngceleni uma ufuna ukukwenza ukuba uye esifundazweni sasePapua e-Indonesia engomakhelwane. Indawo edumile yokushayela emanzini.
I-Wewak - isango eliya emfuleni iSepik, lapho ungathola khona isiko leSepik, umfula uqobo, kanye nemidwebo ebanzi evamile yesifunda.
I-Kokoda Track - umzila wasendulo odlula ku-Owen Stanley Range odume kakhulu ngengxenye yawo kwi-WWII.
ILouisiade Archipelago - iqembu elihle lesiqhingi elalihambile; emhlabeni-class diving futhi yachting izulu.
Iziqhingi zaseTrobriand - ezibhekiswe kuzo yi-anthropologist, iMalinowski, ngokuthi "Iziqhingi Zothando".
I-fawords yasePapua New Guinea - izindawo ezihehayo, ukudonsa okukhulu, nendwangu ye-tapa eyenziwe ngamagxolo kamalibhele, endaweni yaseTufi.
Kunobufakazi bokuhlaliswa kwabantu kudala njengoba kwaba yiminyaka ye-35,000 kulokho manje okuyiPapua New Guinea. Lokhu kuqhamuka esizeni semivubukulo esise Matenkupkum, eningizimu yeNamatanai esifundazweni saseNew Ireland. Eminye imidwebo yemivubukulo ezindaweni ezithile eNew Ireland ithole amathuluzi nokudla okusalile okuvela emuva eminyakeni ye-20,000.
Kubantu abangakwazi ukukwenza lapha, isipiliyoni asilibaleki. Ubuhle bemvelo obumangalisayo abumele buchazwe. Izimbali nezilwane zalo ezihlukile kufaka nemisebe emikhulu yezilwane zasendle nezinyoni, kufaka phakathi iRaggiana bird-of-Paradise (uphawu lukazwelonke) nezinhlobo eziningana ze-kangaroos zesihlahla. Izinsimbi zamakhorali ezingafundiwe ziqhudelana ngokushayeka kweMpi Yezwe II okumangazayo kwabaningi, futhi ukuhamba izintaba kuphuma kulomhlaba.
Ngomhlaba omkhulukazi, ukungathembani phakathi kwezizwe, kanye nezilimi ezahlukahlukene, ukuganana phakathi kwabantu, kuze kube muva nje, bekukhawulelwe kakhulu. Ukubukeka komzimba nobuso kuyehlukahluka ezweni lonke; kusuka kulabo ababukeka cishe IsiPolynesia kwezinye izindawo ezingasogwini, ngokusebenzisa iDemo, iHighlanders emfishane, kubantu abade nababukekayo bendawo ezungeze iRabaul eNew Britain kanye nezakhamizi ezinesikhumba esimnyama saseBougainville, cishe esingaqhamuka e-Afrika.
Izindawo eziphakeme maphakathi nePapua New Guinea azizange zibhalwe kuze kube ama-1930 futhi azangeniswa ngokulawulwa nguhulumeni kuze kube sekupheleni kweminyaka yama-1960. Ngenxa yalokhu, abantu bathakazelisa njenge-geography, izimbali, nezilwane. IPapua New Guinea yindawo evame ukuzimaketha njenge 'The Last Unknown' noma indawo lapho ungathola khona 'Abakwa-Stone Age People'.
IPapua New Guinea iseningizimu yekhwetha futhi inesimo sezulu esishisayo. Nokho, ezindaweni eziphakemeyo, amazinga okushisa apholile ngokuphelele. Isikhathi (impela) semvula siqala cishe ngoDisemba kuya kuMashi. Izinyanga ezinhle kakhulu zokuhamba nguJuni kuya kuSepthemba.
Izwe lisendaweni yePacific Ring of Fire, endaweni yokushayisana kwamapuleti amaningi e-tectonic. Kunenqwaba yezintaba-mlilo ezisebenzayo, futhi ukuqhuma kuvama njalo. Ukuzamazama komhlaba kuvame kakhulu, kwesinye isikhathi kuhambisana nama-tsunami.
Ijograge yezwe yahlukahlukene futhi, ezindaweni, ihlangene kakhulu. Isigaxa sezintaba, iNew Guinea Highlands, sigudla ubude besiqhingi saseNew Guinea, sakhe isifunda esinamaphakeme amaningi embozwe yihlathi lemvula elishisayo. Amahlathi aminyene emvula angatholakala ezindaweni eziphansi nezisogwini kanye nezindawo ezinkulu zamaxhaphozi ezizungeze imifula yeSepik neFly. Lo mkhakha ukwenze kwaba nzima ezweni ukuthuthukisa ingqalasizinda yezokuthutha. Kwezinye izindawo, izindiza kuwukuphela kwendlela yokuhamba. Isilinganiso esiphakeme kunazo zonke yiNtaba iWilhelm e4,509m (14,793 ft). IPapua New Guinea izungezwe ngezixhobo zamakhorali ezingaphansi kokuyilawula ukuze izilondoloze.
Iningi labantu bamazwe aphesheya abafisa ukungena ePapua New Guinea bayacelwa ukuthi bathole visa.
Isikhumulo sezindiza iJacksons International in Port Moresby isikhumulo sezindiza esikhulu kunazo zonke emhlabeni.
Ukuqasha imoto noma isithuthuthu, kuyadingeka itekisi
IPapua New Guinea yindawo eyinqaba uma kukhulunywa ngokuhamba. Izimo ezishisayo, i-geogra esabekayo, kanye nokuntuleka kwamandla kahulumeni kusho ukuthi zimbalwa kakhulu imigwaqo egandayiwe ezweni.
Ngaphandle nje kwesikhala esifushane somgwaqo esilixhumanisa ne-hinterland ngokushesha nomgwaqo ozokunika amandla ukulandela ugu oluseningizimu-mpumalanga amahora ambalwa, ayikho imigwaqo emikhulu exhuma iPort Moresby ukuya kwenye indawo.
Umehluko omkhulu kulokhu yiHighlands Highway, eqala eLae (itheku elikhulu lelizwe) futhi igijimela phezulu ezindaweni eziphakeme ngeGoroka iye eMt. UHagen ngemfoloko ebuyela ogwini naseMadang. Ngemuva nje kweMt. Hagen amagatsha omgwaqo, ngomugqa oseningizimu udlula eSouthern Highlands uya eTari ngenkathi umugqa osenyakatho udlula esifundazweni i-Enga uphela ePorgera.
Ithrafikhi ihamba ngakwesobunxele. Izimpawu zomgwaqo zisuselwa ku I-Australia standard, futhi amabanga kuthunyelwa ngamakhilomitha.
ILae, iMadang, iGoroka, iTari, neMount Hagen konke kuxhumene nomgwaqo omkhulu. Njengomfokazi omusha kungakuhle ukuthi uthole usizo kubantu bendawo (isb., Abasebenzi basehhotela). Amadolobhana amaningi anamaphuzu okuqala ambalwa
Ngezilimi ezingaphezu kwe-820 - i-12% yenani lomhlaba wonke - olukhulunywa ePapua New Guinea, bekunzima impela ukwenza wonke umuntu ekhuluma.
I-Kokoda Trail iyimizila eyi-60-mile, eqala endaweni yasePort Moresby nokuholela ku-Owen Stanley Range. Lo mzila waqala ukusetshenziswa ngabavukuzi begolide kuma-1890s futhi waziwa njengendawo yomlando Wempi Yezwe II njengoba amaJapan azama ukufinyelela ePort Moresby nawo. Kuthatha izinsuku ezinhlanu ukuhamba leli threkhi, okubandakanya ukukhuphuka nokwehla okuningi phakathi kweziqongo zezintaba nemifudlana.
Isifunda Esiphakeme senziwe ngentambo ende yezigodi ezivundile, ngasinye sihlukaniswa izintaba okusho ukuthi iHighlands yakhiwe izifunda eziningi ezihlukile.
EsiFundazweni iChimbu (Simbu) kukhona iMount Wilhelm, intaba ephakeme kakhulu yasePapua New Guinea (izinyawo ze-14,880). Ukhuphuka uWilhelm kulula; kepha izinsuku ezintathu noma ezine kunconywa ukuvumela ukubonwa. Ungazami wedwa. Imihlahlandlela yendawo ilungele ukukusiza ngezindleko ezifanele. Kunemibono yomngcele osenyakatho naseningizimu yeNew Guinea ukusuka esiqongweni. UMfula iWahgi kule ndawo uthathwa njengezinye zezindawo zokugcwala amanzi amhlophe emhlabeni.
IMadang ilungele ukugobhoza kwe-scuba kuwo wonke amazinga, futhi izixuku zamakhorali ziyikhaya lezinhlobonhlobo zezinhlanzi ezinemibala ehlukahlukene. Kukhona nezikejana ezingaphansi kwamanzi ezindiza zaseJapan ezindiza, nezikhali nemithwalo yemoto. Kusenezintaba-mlilo ezisebenzayo zabantu abahamba ngezinyawo ukuba bangekude naseMadang. IMadang ngumphakathi ochumayo odume ngabaculi bawo bendabuko, amathuba omhlaba wokudonsela phansi kanye nokunotha kwamahlathi alo aseduze.
Ngasentshonalanga uza eWewak. Kuyisango eliya esifundeni soMfula iSepik ngesiko elihehayo elihlukile kulawo maHighlands. Thatha izikebhe ezinde ukhwela umfula kanye nezinceku zawo ukuvakashela umxhwele weHaus Tambaran. ICrocodile Festival (Pukpuk Show) ekuqaleni kuka-Agasti e-Ambunti emfuleni iSepik iyindlela enhle futhi engenabantu abaningi kakhulu kwimibukiso yeGoroka neHagen.
New Britain. Lesi siqhingi sinikeza ukubhukuda okuhle kakhulu nokujuluka. Imizila kuleya ndawo ilungele ukuhamba kwezikhathi zosuku nokuhamba ngehlathi. Kukhona neziphethu ezishisayo ezishisayo nezimbobo zodaka ezivuthayo kule ndawo yesiqhingi. Abantu bakwaBaching abahlala endaweni esenyakatho-mpumalanga yeNew Britain badume ngokwakha izinhlobo zobuciko be-ephemeral, mhlawumbe akukho okuboniswe kangcono ukwedlula ngomdanso wabo womlilo. Imaskhi emangalisa futhi eyenziwe kahle yakhiwa ngamagxolo alo mcimbi futhi ilahlwe njengento engenamsebenzi ngokushesha ngemuva kwalokho.
Indlela ebheke phansi empumalanga ekude yezwe, enethuba elihle lokuvakasha. Ukudonswa kwezinga eliphakeme lomhlaba wonke, uhambo olummangazayo kanye nezimpi zeMpi Yesibili YaseJapan yizinto ezibalulekile. IBougainville sekuyisikhathi eside ihlukaniswe yodwa ngenxa yengxabano ebigudla ugu lwayo. Le paradesi yesiqhingi esiyindilinga inezinye zezinto eziphilayo ezinhlobonhlobo esifundeni, kufaka phakathi ngaphezulu kanye nasemanzini.
I-Trobriand Islands. Lezi ziqhingi Zothando Zaziwa kakhulu ngesiko labo elihlukile.
Ukutshontshelwa kwe-Scuba, usebenzisa omunye wabasebenza ngaphezulu kweshumi lendawo i-scuba diving. Umzimba wemboni kazwelonke we-Scuba Diving indawo enhle yokuqalisa. IPapua New Guinea inezinye zezindawo ezihamba phambili ezihamba ngaphansi kwezihlahla ezishisayo ezishisayo noma kuphi ngegama.
Le nyoni ebuka i-mecca ngezinhlobo zezinyoni ezingaphezu kwe-700 kubandakanya nezinyoni eziningi zepharadesi. Nakanjani ulethe ama-binoculars ahle bese ucela emadolobhaneni ukuba uzinikele ukukusiza ekutholeni izinyoni. Okuhlangenwe nakho okumangazayo! AmaGugu Expeditions enza uhambo ngokuhamba ngePNG ngomkhumbi wokuhamba nawo aphethe i-birding Expert / Lecturer onboard osebenza njengomhlahlandlela futhi avule namathuba okuba yizinyoni.
Okunye okuhehayo lapha ukuhamba ngezinyawo ezintabeni, ezindaweni ezigudle ugu nangaphansi kwezintaba zeKokoda neminye imikhondo. I-Kokoda Track idonsela amakhulu abantu abahamba ngezinyawo ngonyaka.
Ukudoba kuya ngokuya kudumile. Izinhlobo zifaka iBlack Marlin, iBlue Marlin, i-Sailfish, i-Yellow Fin, iSkypoker ne-Dogtooth Tuna ne-Giant Trevally. UMahi Mahi (iDolphin Fish), iMackerel neWahoo. Inhlanzi ebeka inselelo enkulu ibass emnyama, okuthi, iphawundi ngephawundi, ebhekwa njengenhlanzi eqinile kunazo zonke emhlabeni
Imisebenzi ethandwa kakhulu izivakashi lapha yimikhosi efana nokuqhutshwa kwe-The Sing-Sing eGoroka neMt. Imibukiso yeHagen. Ngale mibukiso, kuvame ukuba nama-ensembles angaphezu kwamashumi amahlanu akhuphukayo. Imikhosi iyancintisana kanti ne-ensemble ewinayo ivuzwa ngokumenywa ukuba inikeze amakhonsathi ezindaweni zokudlela eziningi namahhotela ngonyaka olandelayo. Lokhu ubuhle nemibala yemikhosi yaseNew Guinea kuyathandeka ukubukwa ngabavakashi futhi kusiza abantu bendawo ngokwezezimali.
Akukho ukuthenga okungaka ngomqondo ojwayelekile. Emadolobheni amakhulu kunezindawo ezinkulu ezitolo ezinkulu nezitolo ezinkulu. Ngaphandle kwalokho, iningi lokuthenga lenziwa ezimakethe ezincane eziphethwe ngokungafanele. Indawo enhle ongayivakashela imakethe yezikebhe ebanjwa kanye ngenyanga ePort Moresby ngaphesheya kwe-Ela ebhishi epaki lezimoto le-IEA TAFE College. Lapho, ungakwazi ukuthenga imisebenzi yezandla kuzo zonke izingxenye zezwe. Yize kubiza kancane ukwedlula emadolobhaneni, amanani entengo anengqondo impela. I-Haggling akuyona neze inkambiso eyamukelekayo, umuntu angahlehla kancane kodwa ukuyenza ngokweqile kungacasula abantu bendawo.
Ukudla ikakhulu akunazinongo. Indlela ejwayelekile yokupheka yi-Mumu, kuhhavini ongaphansi komhlaba lapho kuphekwa inyama nemifino, njengeKaukau (amazambane amnandi). Cishe sonke isidlo, kukhona irayisi nolunye uhlobo lwesitashi.
Kumakamelo okuhlala izivakashi, kuvame ukuhlanganiswa phakathi kwalolu hlobo lokudla nemenyu eNtshonalanga.
Iminyaka esemthethweni yokuphuza / yokuthenga utshwala yi-21. Kodwa-ke, ngenxa yemikhawulo yobudala obukhulu, ukuphuza ngokweqile kube yinkinga enkulu.
Kunemikhiqizo yobhiya wasendaweni. Uhlobo lomuzi wendawo, i-SP (emfishane yeSouth Pacific) Lager, luphethwe ngabakwaHeineken. Ubhiya newayini kuvame ukuhanjiswa kufudumele kahle ngenxa yokuntuleka kwesiqandisi ezindaweni ezithile. Futhi, ngenkathi ikhwalithi yamanzi ihlukahluka kuye ngendawo (futhi kwezinye izikhathi usuku nosuku), ngokuvamile kungcono kakhulu ukunamathela emanzini anamabhodlela, ngisho nasemahhotela emakethe ephezulu. Utshwala buyatholakala yonke indawo ezindaweni ezinamalayisense abathengisa utshwala. Kodwa-ke, utshwala bungaba nzima ukuthola kwezinye izindawo ezicezile, ngenxa yezinkinga zokuhamba.
Imizana iphephe impela njengoba abantu bendawo “bezokuthatha” njengeyabo. Ezindaweni eziningi, uma uwedwa, omunye umuntu uzofuna ukukuphelezela lapho ufuna ukuya khona noma ngabe kufanele baphume ngendlela yabo futhi awuzange uyicele. Iningi labantu linomusa kakhulu, linelukuluku futhi liyasiza futhi kulula ukutshela abantu ababi abavela kuwo wonke umuntu.
Into ebaluleke kakhulu ukuthi uhlale usesikhathini somthetho kanye nokuhleleka kwezindawo ezindaweni ohlela ukuzivakashela.
Okungenani esifundeni seHighlands izimpi zezizwe zenzeka ngezikhathi ezithile. Ikakhulu ukhetho lukazwelonke lungavusa ubutha ezizweni. Amaqembu alwayo aqonde ngqo komunye nomunye kepha umoya wobudlova ukhona. Ngeshwa kunesibalo esikhulu sezikhali ezingekho emthethweni eziphezulu ezingekho emthethweni eziseHighlands ezingasetshenziswa empini yezizwe. Kuwukuhlakanipha ukungabi kude nezindawo zempi nezindawo ezinomlando wakamuva wempi.
IPapua New Guinea iyikhaya lezintaba-mlilo eziningi ezisebenzayo futhi izindlela eziningi ezaziwa kakhulu ezibandakanya ukusondela noma ukukhuphuka eyodwa noma ngaphezulu kwalokhu. Hlala ulalela izeluleko zasendaweni njalo uhlola njalo i-The Smithsonian Institute's Volcanic Activity Report kungaba ukuhlakanipha.
Thepha amanzi ezifundeni eziningi akuphephile ukuwaphuza.
Njengakwamasiko amaningi aseMelanesia, ukubingelela abantu ngokubambana ngezandla kubaluleke kakhulu. Yazi, nokho, ukuthi kuwuphawu lwenhlonipho hhayi ukuxhumana ngamehlo. Ukubona abasebenzi behhotela bekubiza ngamagama, ukuxhawula isandla sakho nokubheka phansi kungabonakala kungjwayelekile ekuqaleni.
I-Digicel umhlinzeki we-telecom ongcono kakhulu. Ikhadi elisha le-SIM elikhokhelwa kulula ukulithenga futhi lingasetshenziswa kunoma iyiphi ifoni engavaliwe.
Kuk Kusasa Kwezolimo Kwezolimo